Global Voices teny Malagasy » Miatrika olana ara-tontolo iainana ny reniranon’i Litani ao Libanona, renirano lehibe indrindra ao amin’ny firenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Novambra 2018 15:45 GMT 1	 · Mpanoratra Christophe Maroun Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Libanona, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Sakafo, Tontolo_iainana
Amin'izao fotoana izao, tandidonin-doza maro ny renirano. Araka ny filazan'ny Litani River Authority (LRA), sampan-draharaham-panjakana natsangana tamin'ny taona 1954 izay misahana ny fanamorana ny fampivoarana ny lakandranon'i Litani, ny olana goavana  misy eo amin'i Litani dia ny fanararaotana sy fitrandrahana tsy voafehy amin'ny loharano, ary ny rano maloto avy eny an-tokantrano sy orinasa mandeha mivantana ao amin'ny renirano.
Efa-taona taty aoriana, tsy dia nisy zavatra maro niova. Tamin'ny volana Jolay 2016, nampiseho ny Ivo-toerana Fametrahana Rano ao Libanona Atsimo  fa nahitana bakteria izay miteraka aretina isan-karazany ny rano maloton'i Litani, anisan'izany ny tefoedra sy ny salmonela. Na dia ny tany manamorona ny renirano aza dia tratra ihany koa, satria 37 isanjaton'ny faritra no voan'ny salmonela, araka ny filazan'ny SLWA (roa isan-jato ny tahan'ny “azo antoka” ekena).
Nampiseho ny fikarohana nataon'ny Oniversite Amerikanina ao Beirota  fa ny rano nalaina tao Litani nandritra ireo volana fahavaratra maina kokoa dia rano maloto avokoa. Hita fa feno singa-metaly mivangongo be ireo legioma voatondraka tamin'ny rano maloton'ny renirano, izay mety hisy fiantraikany amin'ny hoza-doha ary manakorontana ny fiasan'ny fo sy ny voa.
Nitarika hetsi-panoherana maro avy amin'ireo olom-pirenena izay manana fivelomana miankina mivantana amin'ny renirano ny tsy firaharahiana mitohy. Tamin'ny volana Aogositra 2016, notapahan'ny  mponina ao an-tanànan'i Qaraoun, tanàna amorom-parihy Qaraoun ny lakandrano mba hanoherana ny fandotoana ao amin'ny fitehirizan-drano sy ny fofona maimbo avy ao. Tany am-piandohan'ity fahavaratra ity, niantso ny governemanta mba hanonitra azy ireo noho ny fatiantoka azon'izy ireo nateraky ny loto tao amin'ny reniranon'i Litani ny tompon'ny trano fisakafoanana sy ny toeram-ponenana  any atsimon'i Libanona ..
Ny 9 Novambra 2018, taorian'ny fanombanana ara-teknika ny LRA dia namoaka  ny lisitr'ireo orinasa nampangain'ny fitsarana ady heloka bevava ao Zahle tamin'ny fandotoana ny Renirano Litani. Ankoatra izany, nizara lahatsary fohy mampiseho ny habetsaky ny fahasimbana tao amin'ny dobon'ny renirano noho ny tsy fahampian'ny fampiharana ny lalàna momba ny tontolo iainana izy ireo. Manizingizina ny LRA fa manomboka amin'ny fampiharana ny fenitry ny fanarahan-dalàna momba ny tontolo iainana eo amin'ireo orinasa ara-dalàna sy tsy ara-dalàna ny fiarovana ny renirano Litani manoloana ny loto indostrialy.
Tamin'ny fanadihadiana momba ny toekarena ara-politikan'ny rano any Libanona, manasongadina ny fiantraika goavan'ny fahasimban'ny tontolo iainana eo amin'ny loharano ao amin'ny firenena ilay mpikaroka Dr. Karim Eid-Sabbagh sy ilay mpanao gazety tsy miankina Paul Cochrane. Ny sarimihetsika nataon'izy ireo, We Made Every Living Thing from Water  dia mampiseho ny hetsika ataon'ny olom-pirenena manoloana ny tsy firaharahan'ny governemanta ny olana ara-tontolo iainana, mba hiarovana ity loharano sarobidy ity.
Noho ny rafitra ara-panjakana sy ny lalàna marefo, dia miatrika fanamby maro ny sehatry ny rano Libaney. Manasongadina ny sasany amin'ireo olana lehibe ny Fanack Water , izay mikendry ny hanome vaovao voakaroka tsara momba ny toetry ny loharano ao amin'ny faritr'i MENA (Afovoany Atsinanana Afrika Avaratra): ny tsy fahombiazan'ny rafitra fitsinjarana rano ho an'ny vahoaka, ny faharatsian'ny tolotra omena, ary ny tsy fahaiza-mitantana ny rano maloto, ankoatra ny olana vokatry ny rafitra ara-panjakana sy ara-dalàna mizarazara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/14/130294/
 fanakatonana orinasa 75 : http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Nov-09/468722-government-gets-tough-on-polluters-of-litani-river.ashx
 olana goavana: http://www.litani.gov.lb/en/?page_id=71
 Nitatitra : http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Jun-06/259053-730m-plan-to-clean-up-the-litani-unveiled.ashx
 Ivo-toerana Fametrahana Rano ao Libanona Atsimo: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Jul-09/361117-litani-pollution-causes-local-outrage-distress.ashx
 55 tapitrisa dolara : http://projects.worldbank.org/P147854?lang=en
 fikarohana nataon'ny Oniversite Amerikanina ao Beirota: http://website.aub.edu.lb/news/2013/Pages/water-contamination.aspx
 ny tompon'ny trano fisakafoanana sy ny toeram-ponenana: http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2016/Jul-18/362723-south-lebanon-residents-say-litani-pollution-destroyed-tourism-demand-compensation.ashx?utm_source=Magnet%26utm_medium=Entity%20page%26utm_campaign=Magnet%20tools
 miatrika fanamby maro : https://www.facebook.com/EveryLivingThingFromWater/videos/223030661598904/